आज, विपत्तिहरू बढ्दो कठोरतासाथ र बारम्‍बार आइरहेका छन्। यी चिन्‍हहरूले बाइबलमा अगमवाणी गरिएका आखिरी दिनहरूका ठूला-ठूला विपत्तिहरू सुरु हुन् लागेको सङ्केत गर्दछन्। हामी कसरी परमेश्‍वरको सुरक्षा प्राप्त गर्न र यी विपत्तिहरूको माझमा जीवित रहन सक्छौं? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आज, विपत्तिहरू बढ्दो कठोरतासाथ र बारम्‍बार आइरहेका छन्। यी चिन्‍हहरूले बाइबलमा अगमवाणी गरिएका आखिरी दिनहरूका ठूला-ठूला विपत्तिहरू सुरु हुन् लागेको सङ्केत गर्दछन्। हामी कसरी परमेश्‍वरको सुरक्षा प्राप्त गर्न र यी विपत्तिहरूको माझमा जीवित रहन सक्छौं?
अघिल्लो: हामीले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका धेरै वचनहरू पढेका छौं। तिनमा अख्तियार र शक्ति छ, र ती साँच्चै परमेश्‍वरका आवाज हुन्। तैपनि पाष्टर र एल्डरहरूले बाइबलमा यो लेखिएको छ भनेर भन्छन्, “तिमीहरूलाई ख्रीष्‍टको अनुग्रहमा बोलाउनुहुनेबाट तिमीहरू त्यति चाँडै अलग भएर अर्को सुसमाचारमा जान्छौ भन्‍नेप्रति मलाई आश्‍चर्य लाग्छ: जुन अर्को सुसमाचार होइन; तर तिमीहरूलाई समस्या दिने, र ख्रीष्‍टको सुसमाचारलाई बिगार्ने कतिपय छन्। तर हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचारभन्दा फरक सुसमाचार हामीले, वा स्वर्गका दूतले तिमीहरूलाई प्रचार गर्छौं भने, ऊ श्रापित होस्” (गलाती १:६-८)। पावलले बोलेका यी वचनहरू हेरेर, पाष्टरहरू र एल्डरहरूले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरमाथिको हाम्रो विश्‍वासले प्रभु येशूको नाउँबाट, र प्रभु येशूको बाटोबाट भड्काउँछ भनेर भन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामी अर्को सुसमाचारमा विश्‍वास गर्छौं, र यो धर्मत्याग हो, प्रभुप्रति एउटा विश्‍वासघात हो। तिनीहरूले भनेका कुरा हामीलाई गलत जस्तो लागे पनि तिनीहरू कुन कुरामा गलत छन् भनी हामी निश्चित हुन सक्दैनौं। कृपया, यस विषयमा हामीसँग सङ्गति गर्नुहोस्।